Busaa - Wikipedia
Busaan (malaria) dhukkuba daddarbaa kan bayyinaan naannoo tiroopikii fi sab-tiropikii kessatti ardii Ameerikaa, Eshiyaa fi Afrikaatti argamu. Dhukubni kun tilmaaman hanga ummata miliyoona 400 ta'u wagga tokkotti kan qabu yoo ta'u, ummatta miliyoona 1 hanga 3 ta'an waggaatti ajjeesa. Ummatni dhibeen kun bayyinaan ajjesus ijolle xixiqqoo Sab-Sahaaraa Afrikaatti argamani.
Dhibee busaa kan namarraa namatti dabarsu bookee busaa ishii dhaltuu Anoofeles jedhamuun beekkamtu. Maxxantoonni busaa nama qabsiisan seelii dhiiga diimaa keessatti kan wal horan yoo ta'u kanarraan kan ka'e, busaan hirrina dhiigaa (anaemia), akkasumas mallattoo oo'a qaamaa, qorri namtti dhaga'amuu, of wallaaluu fi du'a fida. Dhibee busaa ittisuuf akka bookeen busaa nama hin hiddine(ciniinne) gochuun barbaachisaa dha. Kana gochuuf agobarrii fayyadamuu, qoricha bookee busaa biifuu, fi bishaan ciise gogsuun fala ta'a.
Dhibeen busaa talaalli hin qabu. Kanarraan kan ka'e, falli inni guddaan akka dhibeen kun nama hin qabne ittisuudha. Qorichi dhukkuba kana ittisu garuu gatiinsaa miyaa waan ta'eef namoonni naannoo busaaf saaxilame jiraatan gatii isaa hin danda'an. Ga'eessota nannoo busaaf saxilame keessa jiraatan baayyeerratti dhibeen kun deddebi'ee itti ni ka'a, akkasumas humni dhibee kana ittisuu isaaniis dadhabaa deema. Dhukkuba kana yaaludhaaf qoricha akka kuniin(quinine) ykn artemisiniin(artemisinin) fayyadamuun kan beekkame yoo ta'u dhibeen busaa garuu yeroodhaa gara yerootti qorichoota kanatti baraa jira.
"https://om.wikipedia.org/w/index.php?title=Busaa&oldid=30874" irraa kan fudhatame
Fuulli kun dhumarratti kan gulaalame guyyaa 28 Fulbaana 2018, sa'aa 01:49 irratti.